September 2017 – Kalfadhi
September 26, 2017 Kalfadhi
Xildhibaanad Naciima Maxamed Gacal oo xubin ka ah baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya waxa ay ku dhalatay magaalada Muqdisho sanadkii 1986. Isla magaalo-madaxda ayay ku barbaartay oo ay waxbarashadeeda ilaa heer dugsi sare ku qaadatay. Heerka hoose ee waxbarashada waxa ay ku qaadatay Dugsiga Bustaale, halka dhexe iyo sarena ay ku dhammaysatay dugsiga Al-Masal. Cilmiga caafimaadka bulshada ayay ka baratay jaamacadda haweenka ee Ahfad ee dalka Suudaan. Isla sanadkii 2012 oo ay jaamacaddaas ka qaadatay shahaadada heerka koowaad ayay ku biirtay baarlamaankii sagaalaad oo markaas ay xuliddiisa socotay. Markii ay muddo…
September 26, 2017 September 11, 2018 Kalfadhi
Xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ku dhashay magaalada Boorama ee gobolka Awdal sanadkii 1966 wuxuu ka mid yahay mudaneyaasha baarlamaanka 10-aad ee federaalka ah ee Soomaaliya. Mas’uulkan oo ku cusub Golaha Shacabka, doorashada uu ku soo baxay, kuna matalay Boorama waxay bishii Diseembar ee 2016 ka dhacday magaalada Muqdisho. Waa markii ugu horreysay siyaasadda. Wuxuu horay u soo noqday bare, maamule iyo la-taliye la soo shaqeeyay jaamacado iyo hay’ado caalami ah. Waddan jaceylka iyo dareenka ah inay jirto mas’uuliyad ka saaran dalka ayaa ku dhalisay inuu xilkan qabto. Xildhibaan…
September 26, 2017 September 26, 2017 Kalfadhi
Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya wuxuu leeyahay guddiyo ka kooban xubno xildhibaanno ah, kuwaas oo arrimo gaar ah u qaabbilsan Golaha Shacabka. Halkan ka akhriso magacyada guddiyada, hoggaamiyeyaashooda iyo mudaneyaasha xubnaha ka ah.
Xildhibaan Aadam Isxaaq Cali
September 25, 2017 September 26, 2017 Kalfadhi
Mudane Aadam Isxaaq Cali oo ka mid ah xildhibaannada baarlamaanka tobanaad ee federaalka ah ee Soomaaliya waxa uu ku dhashay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, 24-kii Luulyo 1987. Xildhibaankan ayay doorashadii u dambeysay ee Diseembar 2016 u ahayd markii ugu horreysay oo uu kursi ku yeesho Golaha Shacabka. Waxaa laga soo doortay degmada Luuq ee gobolka Gedo oo hoostaga maamulka Jubbaland. Mudanaha oo ku cusub siyaasadda, wuxuu horay uga shaqeyn jiray wacyigelinta bulshada. Intii aan xilkan loo dooran wuxuu qeyb ka ahaa mashruuca Disarmament Demobilization and Reintegration (DDR)…
Senator Ilyaas Cali
September 25, 2017 Kalfadhi
Ilyaas Cali oo ka mid ah xildhibaannada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu ku dhashay degmada Buur-hakaba ee gobolka Bay, sanaddii 1983-dii. Markii uu xildhibaan noqonnayay ayuu ka yimid dibadda oo ay weli ku nool yihiin xaaskiisa iyo carruurtiisa. Waxbarashadiisii hoose iyo dhexe waxa uu ku qaatay dugsiga Waaberi ee Buur-hakaba. Halka sarena uu ku qaatay Usama Bin Zayd oo Muqdisho ku yaallay, gaar ahaan degmada Hodan. Ilyaas aqoontiisu waxa ay gaarsiisan tahay Master Digree. Jaamacadda Muqdisho ayuu 2006 ka baxay, halka Master-ka uu ku sameeyay Germany jaamacadda FAU.…
CASHIRKA LAGA BARAN KARO MOOSHINKII KA DHANKA AHAA WASIIRKA DASTUURKA
September 3, 2017 October 3, 2017 Kalfadhi
Hadda way dhamaatay xiisaddii ka dhalatay dooddii baarlamaanka ee dib-u-eegista xilka Wasiirka Dastuurka Cabdi Xoosh. Laakiin waxaa jira cashir-siyaasadeed weyn oo laga baran karo arrintaas, oo anfici laheyd xukuumaddan ama kuwa kale ee imaan doona. Marka koowaad, waa in xildhibaannada mucaaradka ah ay ku guuleysteen inay kasbeeyaan oo si xoog leh ay u cabsi geliyaan dowladda lix bilood jirka ah. Waxa ay sameeyeen dhoolla-tus siyaasaadeed oo ay isugu muujinayaan inay yihiin koox si heer sare ah u abaabulan, una xoog badan, dowladduna waxa ay ula dhaqantay sida ay isu muujiyeen.…